आधा दर्जन कारण देखाउँदै बाबुरामले सुरू गरे ओली सरकार हटाउने ह्यासट्याग…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले ओली सरकारलाई हटाऔं ह्यासट्याग सुरू गर्दै संक्र’मित बिरामी र जनताको दु:खमा साथ् सरकार नचाहिने बताएका छन् ।
उनले जनताको उपचारबाट पन्छिने सरकारी निर्णयको कडा आलोचना गर्दै सोमबार बिहान एक ट्वीट सन्देश जारी गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘यस्तो सरकार किन चाहियो ?’ ओली सरकारलाई हटाऔं भन्ने ह्या’सट्याग प्रयोग गर्दै उनले लेखेका छन्
को’रोना उप’चार खर्च आफैं व्यहोर ! बेहोस भए मात्रै अस्पताल जाऊ ! बेरोजगार श्रमिक रूँदै गाऊँ फर्क ! भारतबाट फर्केका श्रमिक भोकै परेपछि दशैंको मुखमा भारततिरै फर्क ! महिनौंदेखि स्कूल-कलेज ब’न्द भएर अल’पत्र परेका विद्यार्थी जेसुकै गर !
आसेपासेहरू कमिसन/भत्ता डकार ! यस्तो सरकार किन चाहियो ?’ सरकारले कोरोना महामा’रीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदाल’तको परमादेशविपरीत सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
Prevनियमित कफी पिउँदा हुन्छ ? यति धेरै अचम्मैको फाइदा छन…हेर्नुहोस् । जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोस् ।
Nextनेता प्रकाशमान सिंह भन्नुहुन्छ : खातामा दशैंभत्ता पठाएर सरकारले सांसदहरुलाई जनताको नजरमा बदनाम गर्ने खोज्यो !